Ejipta: Antsafa natao tamin’ilay mpanao herisetra amin’ny “Baha’is” · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Antsafa natao tamin'ilay mpanao herisetra amin'ny “Baha'is”
Manana hoavy ve ny firenena iray mandà ny fisian'ny "Hafa"?
Voadika ny 02 Septambra 2020 5:12 GMT
Nitafàn'ilay Ejiptiàna bilaogera, Ibn Rushd, ny iray tamin'ireo nanao nanafika ny Baha'is .
Indro ny fandikàna avy amin'io antsafa io, izay niaiken'ilay mpanafika ny anjara andraikiny tamin'ny fandoroana trano enina anà fianakaviana “Baha'is” tao amin'ny tanànan'i Shoraneya:
Teratany Ejiptiàna tsotra i Mohamed izay mizara fihetsika tony ety ivelany, toy ireo Ejiptiàna maro hafa. Teraka sy notezaina tao an-tanànan'i Shoraneya izy, ary tsy tapaka ny mandeha mankao Kairo mba hitady izay kely hivelomany.
Efa mba nandre ny momba ny Shoraneya ve ianao? Aza mampiasa zanak'atidoha! Ilay vohitra nitrangana fandoroana trano enina io, rehefa avy niseho tamin'ny fahitalavitra Ing. Ahmed Abu Al A'ala, Baha'i iray avy ao amin'io vohitra io, nanamafy fa misy 1 000 ireo Baha'is monina ao Shoraneya. Nahatezitra ireo mponina tao amin'ilay vohitra ireny filazany ireny, izay tonga hatrany amin'ny fandoroana ny tranon'ireo Baha'is.
Noho ny kisendrasendra, tafahaona tamin'i Mohamed aho tao amin'ny trano iray mpivarotra mofo ao Boulac El Dakrour ao Gizeh. Rehefa fantatr'i Mohamed fa mpanao gazety aho, nitsiky izy teo am-pitenenana tamiko hoe: “Fantatrao ve fa isan'ny iray tamin'ireo mahery fo avy ao Shoraneya aho?” Nahagaga ahy ny nitononany ny tenany ho “mahery fo” ary nanosika ahy hangataka taminy mba hitondra fanazavàna.
“Mihevitra ny tenanao ho maherifo ve ianao satria nahadoro tranon'olona nisafidy ny hino an'Andriamanitra amin'ny fomba hafa?” Nobanjininy aho no sady novaliany hoe : “Tsy takatrao; aleo hohazavaiko aminao… miaina anaty henatra antsoina hoe Baha'i izahay. Isaky ny miala ny vohitra misy anay izahay mba handeha hiantsena, hadrohadroin'ny olona izahay amin'ny filazana anay ho “Baha'i tsy mino an'Andriamanitra”. Indray andro izay, tsy maintsy nandao ny nosy aho mba hikarakara taratasy maika, nanda ny tsy hitondra ahy ny sambo mpitatitra satria aho avy ao Shoraneya. Voahodidina rano ny vohitray. Hoy izy tamiko: “Tsy handoto ny samboko amin'ny tongotrao Baha'i aho, r'ilay zanaka mpivarotena ity”.
Notohizan'i Mohamed tamin'ny filazana fa ataon'ireo mponina any amin'ireo vohitra hafa ao anatin'ny fari-pitantanana Sohag ho toy ny fako ry zareo. Nirohotra namely ahy izy ireo noho izaho mpiray vodirindrina amin'ireo nanafika ny finoana Silamo.
“Inona no tianao ambara amin'ny hoe nanafika ny Silamo?”
“Eny… nisy lehilahy iray izay, nanana fahazarana nitarika anay tamin'ny fivavahana; taona vitsy taty aoriana dia hitanay fa hay Baha'i ranamana. Nandeha ny resaka fa hoe tsy midio izy rehefa mivavaka satria tsy ninoany ireo fameperana napetraky ny finoana Silamo momba io teboka io.”
“Ao Shoraneya, ahoana no fahitànareo ny vondrompiarahamonina Baha'i?”
“Olona ratsy ry zareo Baha'is; Jiosy ry zareo raha ny marina! Fantatray fa mifanakalo vady ry zareo sady pelaka”.
“Ahoana no nahafantaranao ny zavatra tahaka izany ry Mohamed?”
“Ny Sheikh no nanambara izany taminay nandritra ny toriteny iray taorian'ny vavaka, nanomboka teo dia tsy nisy olona nahazaka ny fisian'ireo Baha'is intsony. Hàlanay ry zareo, ary rehefa nipoitra tao amin'ny fahitalavitra i Ahmed Abu El Ela dia nahatsiaro ho tafintohina daholo izahay rehetra. Araka izany dia tapaka ny hevitray fa handoro ny tranon-dry zareo … na ny “shérif” aza, rehefa tonga ka nahita ny afo nijoalajoala, dia niteny taminay fa tena lehilahy sy maherifo izahay.”
“Tena niteny izany taminareo ve izy?”
“Eny… ary nalahelo mihitsy aza izy hoe tsy lanin'ny afo daholo ny tranon-dry zareo. Tamin'io fotoana io aho tao Shoraneya niaraka tamin'ny rahalahiko, samy nandoro ireo trano izahay. Nosamborina izahay, saingy navotsotra ny harivan'iny ihany ary tsy nisy intsony na iray aza polisy nanelingelina anay, satria hitan-dry zareo nazava tsara fa olona mahery fo izahay ary nanao asa ho an'ny vohitra.”
Nitsahatra teto avy hatrany ny antsafa, araka ny nitateran'i Mostafa Fathy azy:
Tsy nahagaga ahy ireo teny nambaran'i Mohamed; efa im-betsaka aho no nandre momba ireo Kristiana, Jiosy, pelaka sy “Ny Hafa” teto amin'ity planeta ity ; Ilay “Hafa’ no tondroina mandrakariva ho tsy mpino … ahilika…ankahalaina… na farafaharatsiny dia tahaka izany no fisainan'ny ankamaroantsika. Ny fanontaniana mipetraka ao an-dohako dia ny hoe: Nahoana ireo Miozolmana no manilika ny “Hafa” amin'ny fomba maharikoriko sy feno fankahalàna? Ary mbola lehibe kokoa noho izany, inona no hoavin'ny firenena iray izay ny ankamaroan'ny mponina ao aminy no manda tsy hanaiky ny “Hafa” ?